Laser Cutting nke Aircraft Kapeeti maka Aviation Industry - Wuhan Golden Laser Co., Ltd.
A na-eji teknụzụ laser eme ihe n'ọtụtụ ebe na ụgbọelu na mbara igwe, dị ka ịchacha laser na mkpọpu ala maka akụkụ jet, ịgbado ọkụ laser, ịchacha laser na ịchacha 3D. E nwere ụdị laser dị iche iche maka usoro dị otú a, dịka nnukwu ike CO2 laser na eriri laser maka ihe dị iche iche. Goldenlaser awade kachasị laser ọnwụ ngwọta maka ugbo elu kapeeti.
Usoro omenala nke kapeeti ụgbọelu bụ ịchacha ihe. Ọ nwere nnukwu nnukwu ọghọm. Ọnụ mbelata dị ezigbo njọ ma ọ dị mfe ịkwagharị. Ihe na-esote ga-ejikwa aka ya belata ihu ya wee dụzie ọnụ ahụ, usoro nhazi usoro ahụ dị mgbagwoju anya.
Ọzọkwa, kapet ụgbọelu dị ogologo. Mbelata laser na-ejibụ kacha ụzọ maka ịcha ugbo elu kapeeti n'ụzọ ziri ezi na rụọ ọrụ nke ọma. Laser na-ekpuchi akuku blanket nke ụgbọelu na-akpaghị aka, ọ dịghị mkpa ịkwa akwa, na-enwe ike ịkpụ oke oke ogologo na oke nkenke, chekwaa ọrụ na nnukwu mgbanwe maka nkwekọrịta obere na ọkara.
Eriri kapeeti Materials Adabara Laser tingcha
Igodo nke Mkpa Laser tingcha maka blanket blanket
Ngwa ndị metụtara carpets kwesịrị ekwesị maka ịcha laser na akara
Mpaghara Mpaghara, Kapet nke ime ụlọ, Kapet nke dị n'èzí, Doormat, Matgbọala ,gbọala, Kapeeti Inlaying, Yoga ute, Matgbọ mmiri, Airgbọ elu Ugbo elu, Kapet ala, Logo Kapetị, Ugbo elu ụgbọ elu, Eva ute, wdg.
Nkwanye igwe later
Model Mba: CJG-2101100LD
Mbelata okpokoro okpokoro bụ mita 2.1, ogologo tebụl ahụ karịrị mita 11 n'ogologo. Site na tebụl X-Long, ị nwere ike belata usoro dị ogologo karịa site na iji otu egbe, enweghị mkpa ịkpụ ọkara nke usoro ahụ wee mezie ihe ndị ọzọ. N'ihi ya, enweghị oghere ịkwa akwa na mpempe akwụkwọ ọrụ igwe a na-emepụta. The X-Long Isiokwu Design n'ibu ihe kpomkwem na rụọ ọrụ nke ọma na obere nri oge.